माधव नेपालको प्रश्न- एमाले केपी ओलीको निजी कम्पनी हो, हटाउँदैमा हामी हट्ने ? - नागरिक रैबार
माधव नेपालको प्रश्न- एमाले केपी ओलीको निजी कम्पनी हो, हटाउँदैमा हामी हट्ने ?
एमालेका निलम्बित नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई निजी कम्पनी बनाउन चाहेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार पोखरामा आयोजित आफू पक्षीय कास्की जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेपालले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई आफ्ना समर्थकको समूह बनाउन चाहिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘केपी ओली सिस्टममा पार्टी चलाउन चाहँदैनन्, विधि र विधानको पालना गर्न चाहँदैनन् किनभने उनलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु छैन,’ नेता नेपालले भने, ‘उनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, सानो गुटको रुपमा उनको आदेश पालना गर्ने व्यक्तिको समूह लिएर चल्न चाहन्छन् ।’
आफूहरुलाई केपी ओलीको कारबाही मान्य नहुने उनले बताए । पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले १६ चैतमा नेता नेपाल र रावललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेका थिए । बिहीबारमात्रै सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।
‘केपी ओलीले काराबाही गरेर कसले टेर्छ, कसले मान्छ ? उसले मलाई वरिष्ठ नेताबाट हटाएर, स्थायी कमिटीबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवालीलाई हटाएर हट्ने कुरा हुन्छ,’ नेता नेपालले भने, ‘के त्यो (एमाले) केपी ओलीको निजी कम्पनी हो ? हामी अहिले पनि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हौं, वरिष्ठ नेता हौं र उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवमा हौं ।’
ओलीले राज्यका निकायलाई कब्जा गरिरहेको नेता नेपालले आरोप लगाए । गाउँ–ठाउँमा समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिए ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रतिगामी शक्तिसँग साँठगाँठ गरिरहेको नेता नेपालले आरोप लगाए ।
‘आँट भएका, हिम्मत भएकाहरु हामी हौं । केपी ओली वास्तवमा पछुवा समाजका पछुवा तत्वमध्ये पर्छन् । ओली अहिले पनि प्रतिगामी तत्वसँग साँठगाँठ गरिरहेका छन् र आफूलाई सर्वज्ञाता ठानेका छन्,’ उनले भने ।
ओलीले निलम्वित गरेपछि घनश्याम भुसालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
बाबुराम भट्टराईले भने – जसपाले ओलीतन्त्रको घाँस खान्न, चेतना भया
केन्द्र सरकारले नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेमा बढेको अन्तरविरोधको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा ‘फटाफट’ देखिन थालेको छ । गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको हलचल कर्णाली हुँदै लुम्बिनीसम्म पुगेको छ । संसद विघटन, अदालतबाट एमाले–माओवादीको पुर्नस्थापना, एमालेभित्रको अन्तरविरोध र कारवाही प्रकरणले यसअघि मजबुत रहेका भनिएका प्रदेश सरकारविरुद्ध धमाधम अविश्वास प्रस्ताव आउन थालेका छन् । यससँगै प्रदेशहरूमा ‘हलचल’ नै […]
सुवास नेम्वाङ भन्छन्– स्वास्थ्य मापदण्ड आदेश लागु भएकै छैन
काठमाडौं । एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सरकारले सोमबार जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा आदेश कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताएका छन् । सरकारले उक्त आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट बालुवाटारमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र आदेश किन पालना नगरेको भनेर संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङलाई गरेको प्रश्नमा उनले सुरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना […]
काठमाडौँ- नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दैछ ।बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा १ बजेलाई डाकिएको छ ।बैठकमा साविकका २४१ जना र फागुन २८ मा मनोनित २३ सहित २६४ सदस्यहरूलाई खबर पठाइएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । बैठकमा अध्यक्ष आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी ह्विप विपरित ‘फ्लोर क्रस’ […]